UGAAR AH DUMARKA: Waxyaabahan Marna Ha Weydiin Ninkaaga - Aayaha
UGAAR AH DUMARKA: Waxyaabahan Marna Ha Weydiin Ninkaaga
Haddii gabdhaha ay doonayaan guur farxad leh, waxaa jiraan dhowr waxyaabood oo ay tahay inaadan marna weydiin seygaaga.
Waxyaabahaas weydiintooda waa kuwo xun isla markaana aanan u wanaagsaneyn guurkaaga.
Hoos ka aqriso waxyaabaha ay tahay in xaaska aysan marnaba weydiinin seygeeda.
Weydiinta inuu ka tanaasulo riyadiisa
Waad isguursateen marka waxaad isku noqon kartaan tageero iyo laba ruux oo isdhiiri gelisa. Xaas ahaan, waxaa lagaa filayaa inaad taageerto riyooyinka seygaaga isla markaana aad u noqoto dhiirigelin.
Hadaba inaad weydiiso inuu ka tanaasulo riyooyinkiisa maadaama ay xaaladda adagtahay ma ahan waxaad kula talineyso. Tusi inaad mar kasta taageero u tahay isla markaana aad garab taagantahay si uu uga guul gaaro hammigiisa.
Ka dalbashada inuu kala doorto qoyskiisa iyo adiga
Haku dhiiran inaad seygaaga weydiiso inuu kala doorto qoyskiisa iyo adiga. Haddii aad dhib ku qabto qoyskiisa waxa ugu wanaagsan ee aad sameyneyso ayaa ah inaad hesho qaab lagu xallin karo arrinta.
Waad ogtahay wayna iska cadahay inuusan jirin qof qoyskiisa dad kale ka dooranaya maadaama ay yihiin kuwa had iyo jeer garab taagan. Sidoo kale waad ogtahay in adiga iyo qoyskiisa uu dooranayo qoyskiisa.
Sidaa darteed iska ilaali inaad seygaaga weydiiso inuu kala doorto qoyskiisa iyo adiga, waana arrin fool xun oo ay yaqaanaan haween badan. Wadada ugu wanaagsan ee aad mari karto ayaa ah inaad la heshiiso qoyskiisa oo ay nabad idinka dhex dhalato.